Amakhondomu esebenza: ngobuhle nangobubi bawo
Impilo, Kwezempilo zamadoda
ososayensi baseBrithani, siphawula Inyanga ukuthuthukiswa ngokocansi nemfundo okunikelwe abafundi e-University of Wisconsin ukuhlola icebo yabo entsha - amakhondomu esebenza.
Lezi amadivayisi zakhiwe lekhethelo Hemp ngendwangu futhi ngenxa yalokho abazange zingcolisa indawo esizungezile. Ngemva ukusetshenziswa olulodwa, abafundi bakwazi uyiphonse (kuba degradable ngokuphelele imvelo, hhayi ukukhulula compounds ezinobuthi, kuphela izinyanga ezimbalwa), noma ubuyele emuva ososayensi inyuvesi. ososayensi Kukhona-ke kahle bahlanza usebenzisa ekhethekile hypoallergenic magciwane izinto zokususa amabala. By endleleni, uma ungenawo ukugeza amakhondomu esebenza emva ukusetshenziswa, ziba crispy!
Amakhondomu kanye nemvelo
Ngaphezu kwalokho, ososayensi ku ukulahlwa kwezinto okungalawuliwe futhi abavamile amakhondomu alahlwayo, kodwa iminyaka eminingi iphesenti ukubuya imikhiqizo latex zase zihleliwe elincane kakhulu. Amakhondomu esebenza kukhona enye enhle kakhulu alahlwayo Condom imvelo ezingaphephile.
Cabanga indlela amakhondomu yingakho abaningi babakha nje sintanta emifuleni nasolwandle, ukungcola amanzi okuphuza kanye nomoya esiwuphefumulayo. Umuntu ovamile udla amakhilogremu inyama ezingaba ngu-50 ngonyaka, kodwa bambalwa abantu bazi ukuthi izinkomo zethu ezidla, esakhiwa omisiwe amakhondomu esetshenziswa. Ngakho indlela-ke, ejaculates omisiwe esikudlayo ngonyaka?! Ngakho ososayensi baye bafinyelela esiphethweni sokuthi amakhondomu engcono - kuyinto esebenza.
By the way, amakhondomu alahlwayo waqala kuphela ngo-1960, kanti ngaphambi kwalokho iminyaka engaphezu kwengu-20, abantu seniye nagezwa futhi wasebenzisa mikhiqizo izikhathi eziningana.
Ngakho emakethe umhlaba esebenza latex amakhondomu. Zenziwa latex mncane kakhulu (ka 0.1nm esikhundleni 0.6 NM), okungaba ukumelana umonakalo mechanical, ukuxabana futhi ingcindezi. Lo mkhiqizo iklanyelwe i isilinganiso izenzo zocansi 100. Senziwa ibhulashi akhethekile isixazululo magciwane, ngisho kit gluing ka microcracks. Izindleko lo mkhiqizo azungeze $ 20
izakhiwo eqinile nakho ngeke kusize
Enye imodeli entsha imikhiqizo esebenza ukumboza wenduku nge impumuzo ekhethekile. Kwenze ibe yinde umthondo, bandisa isikhathi sokuya ocansini iphinde ivimbele ingozi adenoma, ngenxa yokuthi ukuthi inqubo sobuhlobo bobulili kwenzeka cleaner massage wenduku. Inkinga kuphela - kungcono usayizi ngabanye. Lokhu ikhondomu eyenziwe ngamunye indoda ngayinye.
Indlela yokusebenzisa ikhondomu esebenza
Ngomqondo onabile, akukho eziyinkimbinkimbi lapha. Umahluko owokuthi ukuthi abavamile ikhondomu alahlwayo has ku ubuso bayo ukuphila kube mnandi kuphela futhi esebenza kudinga ukusetshenziswa ezingeziwe zokugcoba, futhi kuzo zombili evele - futhi kwangaphakathi futhi yangaphandle. Ukukhetha ukuphila kube mnandi kuphela, ungakwazi ngokusho ukunambitheka yakho, kodwa kufanele asebenzise ifektri izindawo, ongahluziwe jelly, njengoba sazi, kungalimaza isakhiwo futhi kubangele umkhiqizo esingasebenziseki, okuyinto, kuyobe kakhulu ukunciphisa Pearl Inkomba.
Emva kocansi, susa futhi ugeze ikhondomu. Lokhu kufanele kwenziwe ngokushesha ngoba ukugeza bomile isidoda ke kuyoba yinkinga. Geza kufanele kube isixazululo ekhethekile, okuyinto angathengwa ikhemisi noma ezikhethekile esitolo online.
Kanjani ukuba iguliswa
Kaningi amadoda bakhala ngokuthi iguliswa latex , futhi awukwazi ukusebenzisa i ikhondomu abavamile, ukwakhiwa kanye kweso elahlekile. Yingakho e-US ziye esikhiqiza amakhondomu iraba futhi polyurethane hypoallergenic kukhona esebenza. Kuyinto insindiso yangempela kwabaningi!
Amakhondomu esebenza: ukubuyekezwa kanye imicabango yabantu
Iningi lamadoda ungathandi amakhondomu sisonke - hhayi alahlwayo noma esebenza. Lokhu kungenxa yokuthi, bathini, zibuthuntu lokujabulela. Futhi amakhondomu engcono - isikhumba ke uqobo! Njengoba zokuvimbela inzalo udaba uwela ngqó emahlombe abesifazane. Kodwa uma nethonya umuthi njengoba izinto zokuvimbela inzalo temlomo, ohlobo lwe namanye amadivayisi, ukuthi musa ukuvikela ezifweni ezithathelwana ngobulili, kanye nobuchwepheshe Ukuhoxiswa.
Ngakho-ke, thina yayisazogcwaliseka yokuthi ukusetshenziswa kwamakhondomu kubalulekile. Uphenyo iningi amadoda bathi esikhathini esiningi izingxoxo umehluko phakathi ikhondomu alahlwayo futhi esebenza akuyona wazizwa.
Amanye amadoda bakhononda ngokuthi imikhiqizo esebenza ngokuvamile seziklebhukile ngemuva kokusebenzisa wesibili noma wesithathu. Kodwa intengo zabo iphakeme kakhulu kunanoma nozakwabo zalutho. Lapha, izincomo wukuthi, kumelwe basondele ngokucophelela ukukhetha umenzi. Gwema imikhiqizo ezishibhile Chinese - abayikho, nahlulele by izimpendulo zabantu, akakuthandi kuphela kodwa futhi kubangele komzimba, ukulunywa ngisho ukuvuvukala.
Khumbula ukuthi ezandleni zakho futhi impilo yakho kwezocansi nomlingani wakho - musa skimp on ngokwakho.
Amaconsi El Macho: odokotela ukubuyekezwa, Izimo, indlela isicelo
Qaphela ukuba amadoda. Kuthiwani uma angawutholi umthondo
Anikelelwe isidoda - ngubani? Kanjani ukunikela isidoda?
Umthondo Plastic: izici, ukusebenza kanye nokubuyekeza
Ukususwa we isende ezingabantu, inkathi nasezinkingeni ezilandela ngemva kokuhlinzwa, imiphumela
Indlela ukwelapha papules esibenyezelayo?
Incazelo yomdwebo kaVan Gogh "Ama-Potato"
Ngenxa yalesi sizathu, uyofuna ukuthatha namafutha kafishi!
Isitshalo "silverfish" (powder)? "Jewel": yokusetshenziswa
Indawo yokudlela "Chin-Chin" (eMoscow): incazelo, imenyu, isilinganiso Izibuyekezo
Udokotela wathola ukuthi ukucinana kwemigudu yokuphefumula? Ukwelashelwa ukucinana kwemigudu yokuphefumula, kanye nezindlela ezivamile ukusiza ngokushesha unqobe isifo
Okugeza izikrini - umniningwane obalulekile ekuklanyweni egumbini
Indlela ukubhalisa ingane yakho esikoleni? Amathuba kwekhulu lama-21
Izidakamizwa okungashintsheka: etafuleni. Analogue izidakamizwa ezibizayo
Isihlahla Ornamental: zivunyelwe infield
"A uhambo esidlule" (F. abramov): isifinyezo. "A uhambo esidlule" - indaba kule temibhalo yephrozi netindzaba uhlobo emzaneni